Ogaden News Agency (ONA) – Xafladi Habeenka Hobalada London iyo OYSU oo si heersare ah London uga dhacday
Magaalada London ayaa waxaa habeenimadi Sabtida 22/12/2012 waxaa ka dhacday xaflad lagu taagerayo halganka shacabka Somalida Ogadeniya oo si heer sare ah u dhacday oo ay soo qabanqaabisay Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK. Xafladan oo ururka Bulshada ee OYSU London iskusoo duba rideen ayaa waxaa loogu magac daray Habeenki Hobolada London iyo OYSU. Iyada oo lagu soo bandhigay Hiddaha iyo dhaqanka iyo suugaan halgameed aad loola dhacay.
Xaflada ayaa waxaa kasoo qeyb galay fanaaniinta Somaliyeed ee ku dhaqan magaalada London oo hormuud u ahaayeen Cabdisalaam Jiimi, Jaamac Yare, Cabdisalaam Wajaale, iyo fanaanIta dada yare ururka OYSU hormuudka u ah sida Xaawa Luul, Maxamed Yusuf Yare, iyo abwaanka da’da yar ee Suldaan iyo farsamada oo uu u aggaasimayay mudane Mahad.
Goobtaas waxaa laga qaaday heeso halgameed waxaana hees aad dadka u soo jiitay oo xaflada munaasabadan si gooni ah loogu talo galay ka qaaday Xasen Chaja oo hees si wada jir ah ay wada qaadayaan Jiimi iyo jamac yare iyo Xassen jaja lagusoo bandhigay xafladan.
Dad aad u tiro badan ayaa kasoo qeyb galay xaflada oo u badan haween iyo dhalinyaro ku sharaxan hiddaha iyo dhaqanka somaliyeed iyo calaamado muujinaya halganka shacabka somalida Ogadneiya sida Calanka koofiyado kasameysan iyo maryaha oo lagu soo buufistay calanka Ogadeniya.
Xafladan ay ururka dhalinyarada somalida Ogadeniya soo qabanqaabiyeen ayaa sidii loogu talogalay u qabsoontay abaabul aad u xoogbadana ka dhalisay magaalada London iyo guud ahaanba Wadanka UK oo ilaa machester, birmingham iyo gobole kaleba looga soo safray sidii xafladan ay uga qeyb gali lahaayeen.
::Muuqaalo filimaan ah ayaa dhowaan soo gali doona ee lasoco::